भित्री कथा:यसकारण अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आ’त्मह’त्या गरे – Jagaran Nepal
भित्री कथा:यसकारण अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आ’त्मह’त्या गरे
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इन्डीयन फ्लममा राम्ररी परिचित थिए। चलचित्र उत्कृष्ट भइरहेको थियो। फिल्महरू पनि बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनले कुनै पनि समस्या बिना प्रत्येक फिल्मको लागि ६ देखि ८ करोडको निश्चित शुल्क प्राप्त गर्दै थिए। लगभग १४ करोडको लागि वेब सीरीजका लागि सम्झौताहरू अन्तिम रूप लिइसकेका थिए। त्यसोभए कुन गमले सुशांतलाई मारे? मुम्बई प्रहरी स्रोतका अनुसार बन्दका बीचमा एक्लोपन र सम्बन्धमा नयाँ फाटो सुशांतको मृ’त्युको कारण भयो। विशेष गरी, सुशांतको जीवन अप्रिल पछि पूरै परिवर्तन भयो।
जब जीवनको ट्रेन अडिग हुन्छ र तिनीहरूले यसलाई सुरू गर्न गाह्रो बनाउँदछन्, त्यसोभए जीवन खराब नै हुँदैन। कहिलेकाँही फोहोर कार जस्ता जीवनको कर्बरेटरमा अड्किन्छ। तर हामी यसको लागि कार छोड्दैनौं। बरु, हामी कार्बोरेटरबाट फोहोर हटाउँछौं। तपाईंको छरिएको जीवनलाई जम्मा गर्नुहोस्। जीवनमा अवरोधहरू पैदा गर्ने गल्तीहरू हटाउन प्रयास गरौं। र त्यसोभए जीवन आफ्नै सुरु हुन्छ। रद्दीटोकरी कार्ब्युरेटरमा फस्नुको मतलब यो होइन कि जीवन सँधै मृ’त्युको ग्यारेजमा सधैंको लागि राखिनु पर्छ।
सुशांत सिंह राजपूतको अन्तिम साढे छ घण्टाको कथा : वास्तवमा समाजले सफलता र असफलता बनाएको छ। र व्यक्तिले उसलाई जीवनको वास्तविकता मान्यो। तर सुशांतले किन त्यसो गरे पनि ऊ प्रसिद्ध र सफल पनि भए पनि। त्यसोभए के भयो जसले सुशांतलाई भस्म गर्यो? आखिर किन सुशान्तले आ’त्मह’त्या गरे? मुम्बई पुलिसका अनुसार पो’स्ट’मा’र्ट’म रिपोर्टमा भनिएको छ कि सुशांतको घाँटीमा एउटा नङ लागेर मरे।
घाँटीमा नउको ट्रेसले यो पनि भनिरहेछ कि सुशान्त आफैं पनि नोजबाट झुल्दै, अरु कसैले उसलाई नाङ्गाे झुण्ड्याएको होइन। फोरेंसिक विज्ञहरूका अनुसार सुशांतको घाँटीमा पासो V को निशानहरू छन्। वी को चिन्हले संकेत गर्दछ कि मृ’त्यु नाउबाट स्विङको कारण भएको हो। यदि कसैलाई कसैलाई मारे पछि जालमा झु’ण्ड्याइएको छ भने, O को चिन्ह बनाइन्छ, V को चिन्ह होइन।
फिल्म निर्देशक मुकेश भट्टका अनुसार २०१२ मा उनले पहिलो पटक सुशांत सिंह राजपूतलाई भेटे। त्यस समयमा ऊ आशिकी -२ को कास्टिका लागि मानिसहरूलाई भेट्दै थिए। उनी भन्छन्, “केहि दिन अगाडी जब मैले सुशांतलाई रोड २ कास्टका लागि भेटेँ भने उनी धेरै दु: खी थिए। मैले पनि भनिरहेछु कि तिमी ठीक छौ? उनले भने,” म ठीक छु। तब मात्र मैले महसुस गरे यस केटाको साथ केही समस्या छ। कुरा गरिरहेको बेलामा पनि उनी यहाँ थिएनन् जस्तो लाग्यो। मैले सुन्नको लागि परवीन बबीको बखत त्यस्तै महसुस गरें, यो मेरो लागि अचम्मको कुरा होइन। मैले यो महसुस गरिसकेको छु। ”
कोरोनामा पूर्ण कभरेजको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्आ खिर त्यस्तो के कारण थियो जसले मुकेश भट्टलाई सुशान्तको आ’त्मह’त्याको बारेमा पहिले नै सचेत गरायो। त्यसोभए सुशान्तको आ’त्मह’त्याको कारण थाहा पाउन पहिले केही सत्य जान्नुहोस्। पहिलो सत्य यो हो कि चलचित्र, क्यारियर, सफलता र पैसा, सुशांत यी कुनै पनि कुरामा अभाव थिएन। सुशांतको अन्तिम फिल्म चिचोर एक सानो बजेट फिल्म थियो। तर यसको बाबजुद पनि यस फिल्मले बक्स अफिसमा 150 करोड कमायो। सुशांत अझै सम्म फिल्म उद्योग मा शीर्ष १५ कलाकारहरु मा गनिन्छ।
सुशांत अझै पनि हरेक फिल्मको लागी ६ देखि ८ करोड चार्ज गर्दै थिए। धेरै नयाँ फिल्महरू पाइपलाइनमा थिए र वेब श्रृंखलाको बारेमा कुराकानी पनि लगभग पुष्टि भयो। सुशांतले यो वेब सीरिजका लागि १४ करोड मागेका थिए र उनले पनि यो रकम पाइरहेका थिए। त्यसैले यो स्पष्ट छ कि फिल्म, क्यारियर, सफलता र पैसा सुशांतको मृ’त्युको लागि जिम्मेवार छैनन्।
त्यसोभए, के सुशांतको मुडी र भावनात्मक मुड उनको मृ’त्युको कारण भयो? सुशांतका नयाँ पुराना साथीहरू र परिवारका अनुसार सुशांत एकदम मूडी थिए। उसको मुड एकै पटकमा परिवर्तन हुँदै गयो। यो परिवर्तित मुडका कारण धेरै व्यक्तिहरू सुशांतबाट टाढा गए। यस मुडको कारण, केही राम्रो परियोजनाहरू पनि हात बाहिर गयो। बदलिंदो मुडसँगै सुशांत केहि सम्बन्धको बारेमा अत्यन्तै जोशिलो थिए। उहाँ घरमा आफ्नी आमाको नजिक हुनुहुन्थ्यो। १८ बर्ष अघि आमाको मृ’त्यु भयो।
कोरोना कमांडोलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् र उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् … उनकी आमाको मृ’त्युपछि १ बर्षसम्म सुशांत पटनाको घरमा कहिल्यै पसेनन्। उनी १ बर्ष पछि पहिलो पटक पटना गएका थिए। कोरोनाका कारण विगत ६ महिनादेखि चलिरहेको लकडाउनले सुशान्तको उदासी र तनावलाई पनि बढायो। यस अवधिमा एक्लोपनले पनि प्रभुत्व जमायो किनकि ज्यादातर घरमै बस्छ। शुटिङ बन्द थियो। साथीहरू आफन्तबाट टाढा थिए। यस्तो अवस्थामा अवसादले भरिएको सोचले प्रभुत्व जमाउने मौका पायो।
एक हप्ता अघि सुशांतको पूर्व पीआर प्रबन्धक दिशा सालियनले मुम्बईको चौधौं तलाबाट उफ्रेर आ’त्मह’त्या गरे। सुशांत पनि यस मृ’त्युको बारेमा धेरै दु: खी थिए। तर सुशांतको दिशासँग धेरै नजिकको सम्बन्ध थिएन। वास्तवमा दिशलाई पीआर कम्पनीले सुशान्तको काम हेर्न पीआर प्रबन्धकको रूपमा पठाएको थियो। तर केहि समय अगाडि दिशाले त्यो पीआर कम्पनी छाड्यो, जसको कारण सुशांत पनि बाहिरियो।
टिभी धारावाहिक जुन सुशांत सिंह राजपूत सबै घरहरुमा चर्चित भयो एक पवित्र सम्बन्ध थियो। जसमा उनको विपरित अभिनेत्री अंकिता लोखंडे काम गर्छिन्। यस धारावाहिकको क्रममा दुबै नजिक आए र-बर्ष सम्म लिभ-इन सम्बन्धमा पनि बिताए। उनले कसैसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध लुकाएनन्। 2016 मा, दुबै एक अर्काबाट अलग भए। भनिन्छ कि दुबै विवाह गर्न लागेका थिए।
तर त्यहाँ एउटा कुरा थियो कि विवाह पनि भङ्ग भएको थियो र सम्बन्ध टुक्रिएको थियो। जे होस्, दुबै दुबैले कहिल्यै यो सम्बन्ध बिग्रनको कारण भनेनन। अंकिता पनि एक व्यापारीसँग सगाई गरीन्5बर्ष पछि सुशांतसँग ब्रे’क’अ’प भयो। सुशांतका नजिकका व्यक्तिहरूका अनुसार अंकितासँग ब्रे’क’अ’प गर्नु पुरानो कुरा थियो। जबकि सुशांतको जीवनमा अब नयाँ प्रेम आएको थियो।
सुशांतको यो नयाँ प्रेमको नाम रिया चक्रवर्ती हो। रिपोर्टका अनुसार सुशांत र रिया यस वर्षको अन्तमा विवाह गर्न लागेका थिए। तर स्रोतका अनुसार सुशांत र रियाको सम्बन्ध विगत केही महिनादेखि एक समान थिएन। समाचारका अनुसार रिया र सुशांत मार्चमा लकडाउनको क्रममा सँगै बस्थे। तर त्यसपछि रियाले सुशांतको घर छोडिदिए, के त्यहाँ रिया र सुशांतको सम्बन्धमा कुनै चोट लागेको थियो जुन सुशांतको जीवनको लागि क्यान्सर भयो?
हाल, मुम्बई पुलिसले यस कुरालाई बढी ध्यान दिएर आ’त्मह’त्याको सत्यता खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सुशांत सिंह राजपूतको सोमबार साँझ मुम्बईमा दा’हसं’स्कार गरियो। बुबा लगायत परिवारका सदस्यहरू पटनाबाट मुम्बई पुगेका थिए। यद्यपि सुशान्तका बुबा अझै निश्चित छैनन् कि उनको छोराले आ’त्मह’त्या गर्‍यो। त्यसकारण उनी मुद्दाको छानबिन सीबीआईलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्। सुशांतको मोबाइल, सुशांतको पोस्ट सोशल मिडियामा, सुशांतका साथीहरू, प्रेमिका रिया र घरमा भएका चार साथी र साथीहरू, मुम्बई पुलिस हरेक थोरै सूचना प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैछ जुन सुशांतको मृ’त्युको पहेली हो। समाधान गर्न सक्दछ